မြစ်ဆုံ: ကမ္ဘာ.အကြီးမားဆုံး ခရမ်းချဉ်သီး စပိန်ရိုးရာပွဲတော်
ကမ္ဘာ.အကြီးမားဆုံး ခရမ်းချဉ်သီး စပိန်ရိုးရာပွဲတော်
နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း သြဂတ်လ၏ နောက်ဆုံးအပါတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ. စပိန်နိုင်ငံ တတိယအကြီးဆုံးမြို.တော်ဖြစ်သော Valencina မြို.တော် တွင်ပါဝင်သည်. Bunol မြို. တွင် ကမ္ဘာ.အစည်ကားဆုံး ခရမ်းချဉ်သီး ပွဲတော်ကို ကျင်းပလေ.ရှိတယ်။ ဒီပွဲတော်တွင်
တစ်နိုင်ငံလုံးမှ စပိန်လူမျိုး လေးသောင်းခန်.လာရောက်ဆင်နွဲ.လေ.ရှိပြီး ဗြိတိန် ပြင်သစ် ဂျာမဏီ နိုင်ငံများမှ ဧည်.သည်အများစု လာရောက်ဆင်နွဲတတ်သည်။ စုစုပေါင်း ခရမ်းချဉ်သီး အမှည်. တန်ချိန် ၁၀၀ ခန်.ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။
ပွဲတော်ကို 1944 ခုနှစ်မှ စတင်ကျင်းပ ခဲ.တာ ဖြစ်ပြီး မည်သူကမှ ပွဲတော်၏ မူလဇစ်မြစ်ကို တိတိကျကျမသိပေ။ ရိုးရာဝတ်စုံတွေ ၀တ်ဆင်ပြီး လှည်.လည်ကခုန်ရသော ပွဲတော်တစ်ခုတွင် ခရမ်းချဉ်သီးအမြောက်အမြားတင်ထားသော ကုန်ကား တစ်စင်း တိမ်းမှောက်သွားသည်။ အသီးများအကုန်လမ်းပေါ်သို.ရောက်ကုန်သောအခါ ပွဲကြည်.ပရိသတ်မြောက်မြားစွာမှ ငြီးငွေ.ဖွယ်
ရာကောင်းသော အသံဖြင်. တီးခတ်နေသည်. သံစုံတီးဝိုင်းအဖွဲ.ကို လမ်းပေါ်ရှိ ခရမ်းချဉ်သီးများဖြင်.
ပစ်ပေါက်ကျသည်။ထို.အချိန်မှ စပြီးပေါ်ပေါက်လာသည်ဟု တစ်ချို.သော လူတွေမှ ပြောဆိုသည်။
အများစုသော လူတွေကတော. မြို.တော်ကောင်စီအဖွဲ.ကို မကျေနပ်ကျသည်. မြို.သူမြို.သားများမှ ခရမ်းချဉ်သီးများဖြင်. တိုက်ခိုက်ပြီး အောင်ပွဲခံသောနေ.မှ စတင်ပြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်လို.ဆိုပါတယ်။ စပိန်နိုင်ငံ ပြင်သစ်လက်အောက်တို. ကျရောက်ခဲ.သော အခါ ပွဲတော်ကျင်းပမှုကို တားမြစ်ခံခဲ.ရပြီး
1970 နောက်ပိုင်း အချိန်တွင်မှ ပြန်လည် ကျင်းပနိုင်ခဲ.သည်။
သတ်မှတ်ထားသောရက် မနက် 11 နာရီဝန်းကျင်ခန်.တွင် ပွဲတော်ကို စတင်လေ.ရှိသည်။ ထရပ်ကားများဖြင်.ခရမ်းချဉ်သီးအမြောက်အများကိုသယ်ဆောင်လာပြီး မြို.လယ်ကွက်လပ်တွင်ချပေး
ထားသည်။ အခြားသောဒေသများထက်ပိုပြီးဓျေးနည်း သော Extremadura ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်.ရဒေသ မှ ခရမ်းချဉ်သီးများကို အသုံးပြုကြသည်။
အမဲဆီ သုတ်လိမ်းထားတော နှစ်ထပ်တိုက်အမြင်.ရှိ ချောတိုင် ထိပ်သို. ရဲရင်.သောလူတစ်ဦး တက်ရောက်ကာ တိုင်ထိပ်တွင်ချိတ်ထားသော ၀က်ပေါင်ခြောက်ကို ယူနိုင်သည်. အချိန် ပွဲတော်ကို စတင်ခဲ.ကြသည်။ လက်တွေ.မှာမူ အချိန်အနည်းငယ်ကြာသော ဒီအစီအစဉ်ကို မစောင်.ကြတော.ဘဲ ဒီထက်ပိုပြီးစောလျှင်စွာ ကျင်းပခဲ.ကြသည်။ ပွဲတော် စတင်ဖို.အတွက် ရေအမြောက်ဖြင်. ပစ်ခတ်ပေးပြီးသောအခါ ပရမ်းပတာ ဖြင်. ခရမ်းချဉ်သီးတိုက်ပွဲကို စတင်ပါတော.တယ်။
ပွဲတော်တွင် ပါဝင်ဆင်နွဲသောသူများကို ( လေကာ၊ရေကာ)မျက်မှန်များ ၊လက်အိတ်များဝတ်ဆင်ဖို.
တာဝန်ရှိသူများမှ တိုက်တွန်းထားပါသည်။ ထိုအရာတွေက လုံခြုံသောအကာအကွယ်များ ဖြစ်စေတာပါ။
နောက်ထပ်စည်းကမ်းတစ်ခုက ပွဲတော်အတွင်းသို. မည်သည်.ပစ္စည်မှ ယူလာခွင်.မရှိပေ။ ဘီယာ
ပုလင်းကဲ.သို.သောအရာများဖြင်. ရန်စကာ ပြင်းထန်သော ရန်ပွဲများ ဖြစ်လာနိုင်သောကြောင်.တားမြစ်
ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးနဲ.တစ်ဦး အ၀တ်အစားများ ဆုတ်ဖြဲခြင်းကို တားမြစ်ထားသော်
လည်း အများစုမှ မသိကျိုးကျွံပြုကာ ယောက်ကျား မိန်းမများ၏ အပေါ်ပိုင်းအင်းကျီများကို အပျော်သဘောဖြင်. ဆုတ်ဖြဲကြတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
နေ.လည် တစ်နာရီ တိတိ အချက်ပြ ရေအမြောက်မှ ပစ်ခတ်လိုက်သောအခါ မည်သူမှ မပစ်ပေါက်တော.ဘဲ ပွဲတော်ကို ရပ်တန်.လိုက်သည်။ ထို.နောက် ခရမ်းချဉ်သီးများဖြင်.
ပြန်.ကျဲနေသော လမ်း ကို မီးသတ်ရေပိုက်များဖြင်. ဆေးကြေားကြသည်။ လမ်းများဆေးပြီးသော
အခါ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ.ပေကျံနေသည်. လာရောက်လည်ပတ်သူများကို ဆေးကြေားပေးပါတယ်။ Bunol မြစ်ထည်းတွင် ကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီး ဆေးကြောသော သူများလည်း ရှိသည်။ နယ်ခံလူငယ်များမှလည်း အသက်ကြီးရွယ်သူများကို ကူညီပြီး ဆေးကြောပေးကြသည်။ ခရမ်းချဉ်သီး၏ အနှစ်ကို အားအင်ပြည်.စေသည်ဟု အားလုံးမှ ယူဆထားသည်။
ကမ္ဘာ.အကြီးမားဆုံး အစားအစာဖြင်.တိုက်ခိုက်ကြသော ပွဲတော် အဖြစ် ထင်ရှားပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ ကျော်ကြားသောသူများပွဲတော်ရက်နေ.တွင်စပိန်နိုင်ငံသို.
Posted by မောင်မောင် at 22:08
ဟာ အသားတွေယားတယ်ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ထိရင်း(((((
အိမ်ပြန်ရင် ခရမ်းချဉ်သီးဝယ်ပြီး မဒမ်လွင်ပြင်ကို ပစ်အုံးမှ
31 January 2012 at 10:56